सेनाको ब्यारेक भित्र गोली चल्यो, १ सैनिक जवान घटनास्थलमै ढले, कसरी घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
सेनाको ब्यारेक भित्र गोली चल्यो, १ सैनिक जवान घटनास्थलमै ढले, कसरी घट्यो घटना ?
काठमाडौ। सेनाको ब्यारेक भित्र गोली चल्दा फेरि तरङ्ग पैदा भएको छ। कपिलवस्तुस्थित नेपाली सेनाको शमसेर दल गण भित्र गो’ली चलेको छ। यस्तो छ घटनाको नालीबेली।
बुधबार साँझ ७ बजेतिर गो’ली चल्दा एक महिला सैनिक जवान गम्भीर घाइते भएकी छन्। बुद्धभूमि नगरपालिका गोरुसिंगेमा रहेको उक्त गण भित्र गोली चल्दा सैनिक जवान कोपिला राजवंशी घाइते भएको स्रोतले बताएको छ।
स्रोतको अनुसार घाइते राजवंशीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले भने उक्त घटनाको विषयमा कुनै तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन।राजवंशी आफैंले गो’ली चलाएको दाबी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
छातीमा लागेको गोली पिठ्युँ छेडेर बाहिर निस्किएको श्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै बहालवाला र भूपू अधिकारीहरुमा पदीय र सांगठनिक आचरणविपरितका गतिविधि बढ्न थालेपछि सेनाले लगाम लगाउने उपायको खोजी गरेको छ ।
हालैमात्र जुम्लाका जर्नेलले ब्यारेकभित्र फिल्मी शैलीमा कुदेर आएर श्रीमतीलाई गुराँसको फूल दिँदै प्रेमभावको टिकटक बनाएका थिए। अर्का अवकाशप्राप्त जर्नेलले पनि नाबालक छोरालाई जर्नेलको पोशाक लगाएर टिकटिक बनाउन दिएपछि सेनाको थप आलोचना भएको थियो।
त्यहि आलोचना दोहोरिन नदिन भन्दै नेपाली सेनाले आजबाट दुई दिने ‘सैनिक आचारसंहिता कार्यक्रम, २०७९ शुरु गरेको छ। जंगी अड्डास्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबको सभामण्डपमा सेनापति प्रभूराम शर्मापछिका लेफ्टिनेन्ट जनरल बालकृष्ण कार्कीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
सकलदर्जालाई पदमा बहाल रहँदा वा सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि गर्न हुने र नहुने व्यवहारिक आचरणका बारेमा सु–सूचित गरी अनुशासित, आचरणयुक्त र जिम्मेवारपूर्ण सैनिक बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बलाधिकृत रथी कार्कीले सैनिक आचारसंहिता कार्यक्रमले नेपाली सेनाका सकलदर्जालाई अझै अनुशासित,नैतिकवान र व्यवसायिक फौजको रुपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाली सेनालाई थापिएको रुसी हेलिकोप्टरको पासो: नेपालि सेनालाई धरापहरु थाप्ने र भंगखालोमा हाल्ने प्रयास हरु जारि छन्। रसियन हेलिकोप्टर खरिद गर्ने अर्को महाजाल हो। सयौ तार र दुरविनले विच्याइएको महाजाल जस्तो हो यो।
वास्तममा पुरानो धराप हो यो। कसरी पुर्ब २ प्रधानसेनापति धरापमा पर्नुभएन र जोगिन भएन् त्यो उहा हरुले जाने कुरा भयो। यतिबेला फेरि नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर खरिद गर्ने कुराले बजार तातिएको छ। सेनाले अहिले संगठनलाई रुसी हेलिकोप्टरहरु आवश्यक छ भनेर प्रस्ताव गरेको पनि होइन। ५ बर्षअघि तत्कालीन परिवेशमा गरिएको प्रस्तावको फाइल अहिले खोतलेर सेनालाई पैसा निकाशा दिन खोजिएको छ।
तर त्यही छिप्पिएको र सिकार समाउन नसकेको धरापलाई पुनः थापिएको छ। पुरानो संगठन र नयाँ संगठन प्रमुख दुबैलाई परीक्षण गर्नको लागि। र, मौका मिले दुबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्नका लागि।
बेमौसमको बाजा: मुलुक आर्थिक संकटको भुमरीमा परेको छ। बाह्य हस्तक्षेपमात्र होइन आक्रमणको निशाना बनेको छ। ब्यासक्षेत्र दिनदहाडै हेपेर पेलेर हडप्ने काम भएको छ। मुलुकलाई श्रीलंकाको रोडम्यापमा राखिएको छ। यही बेला हेलिकोप्टर खरिदको समाचारले बजार तताएको छ। त्यो पनि रस्सियन हेलिकोप्टर। जब कि रुसलाई बिश्वले एक्लाएको छ।
दैनिक उपभोग्य बस्तु ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा समेत निर्यात रोक लगाइएको छ। न खरिद प्रक्रिया सजिलो छ न त ढुवानी प्रक्रिया। तर यहाँ चोरको हजार दाउ” भने झैं रस्सियन ईक्विपमेण्टलाई अन्य युरोपियन मुलुक, नभए खाडी मुलुकबाट जबरजस्त ल्याउने बिकल्प अघि सारिएको छ।
बिश्वले नाकाबन्दी लादेको देशबाट हेलिकोप्टर खरिद गर्दा दुनियाले के भन्ला? लोकलाज के ले छोप्नु? शान्तिको समयमा खरिद र आपूर्ति प्रक्रिया जटिल भएको नजिर बनाएको बासी कुरा युद्धग्रस्त मुलुकबाट असामान्य अवस्थामा खरिद गर्ने कुरा कति बुद्धिमानी, ब्यवहारिक र हितकर होला? यो सम्बेदनशील स्वार्थप्रेरित ब्यापारबाट भोलि नेपाल तिरस्कार र बहिस्कृत भयो भने के गर्ने? बिषयबस्तुको बहुआयामिक गाम्भीर्यता र संबेदनशीलतालाई मनन र आत्मसात गर्न अपरिहार्य भएको छ।
पासो माथि पासो: पंक्तिकारले पूर्व संगठन प्रमुखहरुको ध्यानकर्षण गरेको थिएँ। कानमा तेल हालेर बसेपछि त्यसलाई शीघ्र लिपिबद्ध गरि लेख मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ-“फाष्टट्रयाक सडक नेपाली सेनाको ब्याबशायिकता, ईमान्दारिता र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिश्वसनीयता मार्ने हाम्रो बिरुद्ध थापेको प्रायोजित एम्बुस हो। अर्को फाष्ट ट्रयाक बढुवा प्रणाली संगठन भत्काउने सुनियोजित मन्द बिष हो। कोभिड-१९ नियन्त्रणका नाममा सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मा अर्को खतरनाक पासो हो”
मैले देखेको एम्बुस मध्ये औषधि खरिदको धरापबाट धन्य संगठन समयमै सचेत भई बाहिर निस्कन सफल भयो। चोखियो । बाँकी २ गलपासोले संगठनलाई फसाउदै लगेको छ। बिराट संगठनलाई ऐंठन भइरहेको छ। नवनियुक्त प्रधानसेनापतिले अतिरिक्त साबधानी, सतर्कता र त्याग गरेर यी सुनियोजिन पासोहरुबाट संगठनलाई संकटमोचन र उद्धार गर्नुपर्ने छ। अन्यथा, इतिहासले सराप्ने छ।
अन्त्यमा, नेपाली सेना आजपनि एकमात्र अराजनीतिक, ब्यावशायिक र तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी संस्था हो। नेपाली जनताको साझा सम्पति र गौरव हो। आम जनतालाई यो संस्थाको गहिरो माया र बिश्वास छ।
गएको बिनासकारी महाभुकम्प र कोभिड–१९ महामारीमा देखाएको सैनिक त्यागले सेना-नागरिक सम्बन्धको मायाको गाँठो झन् बलियो कस्सिएको छ। यो बिश्वास र आस्थामा चोट पुर्‍याउने काम नहोस भनेर सेना सावधान हुनुपर्दछ। पुरानो एम्बुसबाट सुरक्षित निस्कने र नया एम्बुसमा नपर्ने उसको साबधानी सर्वाधिक अपेक्षित छ। राष्ट्रिय नेतृत्वको खडेरीमा सैनिक नेतृत्वको चट्टानी अडानको अपेक्षा राखिएको हुन्छ।
तसर्थ, रस्सियन हेलिकोप्टर खरिदको गोलमटोल जाली प्रस्ताबलाई रद्द गरेर बाँकी एम्बुसबाट बाहिर निस्किने काममा एकचित्त होस् हाम्रो सैनिक संगठन। तबमात्र मातृभूमिको भविष्य उज्वल हुन सक्दछ।